ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များ allergi နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းယှဉ်တွဲရပ်တည်နိုင်ရေးနိုင်သလား?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 19 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဒါကြောင့်, သင်ပိုကောင်းသိလာအောင်လိုချင်သည်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့ကြပြီ. သင်သည်ထိုသူတို့စကားပြောသည့်အခါ, လူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းရှိမရှိ, သင့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုရှိပါတယ်. You feel that things couldn’t get any better than they are, ထိုအခါသင်နှင့်သင်မတည့်ကြောင်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိသည်လေ့လာသင်ယူ. လုပ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆိုတာဘာလဲ? သင်တို့ကြောင့်သင့်ရဲ့ဓါတ်မတည်မှဆက်ဆံရေးအပေါ်အရှုံးမပေးရန်လိုအပ်မည်? နောက်တဖန်လူတဦးကိုမြင်လျှင်မရွေးချယ်စရာတွေကိုရှိပါသလား? လူအများစု, ရှိပါတယ်.
ပထမဦးဆုံးနှင့်ဗွေဆော်, ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်ဓါတ်မတည်ရှိသည်ကိုသိကြကုန်အံ့. ဒါဟာပွင့်လင်းရိုးသားသောဆက်ဆံရေးရှိသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် (နဲ့စတင်ရန်), စသူတို့သည်သင့်ရှိသည်သောတုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ကျစေရေးနိုင်မည်အကြောင်း. ယင်းကိုသူတို့မည်သို့ပြုနိုင်သည်? ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အသင့်ရက်စွဲမီလတ်ဆတ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားကြသည်သေချာစေနိုင် (သူတို့ဆင်ထားတာထပြီးနောက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်မအပြန်အလှန်အကျိုးပြုရှိခြင်း). ထို့အပြင်, သူတို့သည်သင်၏အဘို့အရက်စွဲရောက်ရှိလာပြီးနောက်သူတို့တစ်တွေ Plus ကိုဖြီးသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့လည်းအလားတူအရာတစ်ခုခုများရှိနိုင်ပါသည် (if their pet rides in the car and there isatransfer from the car to their clothes).
အာရုံစူးစိုက်၏နောက်ဧရိယာသင့်ဓာတ်မတည်၏ပြင်းထန်မှုကိုသိရန်ဖြစ်သည်. သင် OTC ဆေးဝါးဓာတ်မတည် ယူ. ညဦးယံကိုကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်နိုင်သလား? သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦး EpiPen လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်မှုရပါလိမ့်မယ်? တစ်ဦး EpiPen လိုအပ်သောသူတို့၏အဘို့အ, သင်သည် သာ. ကြီးမြတ်သောအဆင့်တွင်ဆက်ဆံရေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, because literally, your health is at risk. တခြားသူတွေအတွက်, ကိုယ့်သေချာသင်တို့၏ဓာတ်မတည့်ဆေးပညာသူတို့နှင့်အတူအတူတကွလာပြီမီယူစေနိုင်သည်, ထိုညဉ့်တွင်ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း, ထို့နောက်သင့်တုံ့ပြန်မှုအားစောင့်ကြည့်.
သင်သည်သူတို့၏နေရာအပေါ်မှာအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်, သူတို့ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွင့်ပြုမထားဘူးအဘယ်မှာရှိအခန်းကို set up နိုင်ပါတယ်. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အလွှာတစ်ခုအနေနဲ့, သူတို့တစ်တွေကြောင့် filtering စက်လေထုထဲက allergens စောင့်ရှောက်ဖို့အပြေးပါပြီနိုင်. အဆိုပါဓာတ်မတည်ဝေဒနာသည်များအတွက်စျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအများအပြားထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်. ထိုထုတ်ကုန်လေထုထဲတွင် dander ၏ပမာဏကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောအာကာသင်ရောက်ခြင်းမှ allergens ထားရန်အတားအဆီးတစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်.
အများဆုံးဓာတ်မတည်ခံစားနေရသူများအတွက်, သူတို့ပြီးသားသူတို့နှင့်အတူဤ extras ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုထပ်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်. သင်အမြဲလက်မှာတစ်ရှုးမျှင်များရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. သင်ယားယံစေဓာတ်မတည်ရှိပါက, ကြဲကြဲမျက်စိနှင့်ပို, သင့်နှာခေါင်းကိုအစဉ်မပြတ်လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒါမှမဟုတ်သင်ဟစ်ကြော်လျက်ခဲ့ကြသော်လည်းသည်အတိုင်းကြည့်လျှင်သင်ကသင့်ယနေ့အထိလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုခံစားစေခြင်းငှါ,. အချို့ကိုသင်မတည့်မျက်စိအဖြစ်ကောင်းစွာသင်နှင့်အတူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ရှိသည်နိုင်. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
သင့်ရဲ့ဓာတ်မတည်သင်ချောင်းဆိုးစေခြင်းပါနဲ့? ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်လည်ချောင်းပေါက် lozenges လျှော့စိတ်ဖိစီးမှုရက်စွဲရှိခြင်းဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. How many times have you gottenatickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? သင်သည်သင်၏ရက်စွဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်တချို့က lozenges သို့မဟုတ်ပင် Hard Candy ရုံအဝေးကိုကလိထိုးဖို့ယူအစိုဓာတ်ကိုနှင့်အင်္ကျီကိုသင့်ရဲ့လည်ချောင်း add နိုင်ပါတယ်.
ပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ, ရိုးဖြောင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်မှု, သင်ဆဲသင်သည်သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှဓါတ်မတည်ရှိသည်တောင်မှတစ်ပျော်စရာဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါသည်.